सुदूरपश्चिम सरकार र कर्णाली सरकारको आयू कति ? « Ok Janata Newsportal
सुदूरपश्चिम सरकार र कर्णाली सरकारको आयू कति ?
काठमाडौं । केन्द्रमा पार्टी एक रहँदा समेत आन्तरिक विवादको ‘कोपभाजन’मा परेको कर्णाली प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि थप संकटमा परेको छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिम सरकारको आयू पनि सकिएको छ । अब, नयाँ समिकरण नबनेमा यी सरकार ढल्ने पक्कापक्की भएको छ ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भइ बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दर्ता सर्वोच्चको आइतबारको फैसलाबाट खारेज भएसँगै प्रदेश सरकार संकटमा फसेको हो । केन्द्रमा कुनै नाटकीय घटनाक्रम विकास वा सहमति भएको अवस्थामा बाहेक महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्ने निश्चित जस्तै छ ।
पार्टी साविकको एमाले र माओवादी केन्द्रको अवस्थामा पुगेपछि शाहीको पद संकटमा पर्नेछ, किनकी शाही तत्कालीन नेकपा तथा साविकको पूर्वएमालेकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने योजनाकारको भूमिका निर्वाह गरेका प्रदेशसभा सदस्य कँडेल त्यतिबेला माधव नेपाल पक्षका केही सांसद्ले साथ नदिँदा पछि हटेका थिए ।
आइतबारको फैसलालगत्तै ओली पक्षका सांसदहरुबीच मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेबारेमा छलफल चलिरहेको स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो । ओली पक्षले तत्काल संसदीय दलको बैठक आह्वान गर्ने तयारी समेत गरिसकिएको बताइएको छ । यद्यपी, ‘नेपाल–प्रचण्ड’ खेमामा रहेका सांसद तथा मन्त्रीहरुले खासै असर नपर्ने दावी गर्दै छन् ।
उसो त पदको लोभमा सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा र सांसद पदमबहादुर रोकायालाई अहिले फसाद परेको छ । ओली पक्ष छाडेर ‘माधव–प्रचण्ड’ पक्षमा गएका उनीहरुले अहिले पर्खे र हेरको स्थितिमा छन् ।
मन्त्री नन्दसिंह बुढाले एमालेले आधिकारिकता पाएपनि थप स्पष्ट भइने बताए । उनले भने, ‘यदि केन्द्रबाट नै पूर्वएमालेहरु एक भए हामी स्वतः आइहाल्ने भयौँ नै।’ यस्तै सामाजिक विकास मन्त्री रावलले सर्वोच्च अदालतले गलत फैसला गरेको दावी गरे । उनले भने, ‘यो निर्णयले राजनीतिक, पार्टी, समीकरणमा समस्या ल्यायो नै । तर, हामी पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही मान्छौँ ।